Jikota / Ikpokọta / Jikọọ YouTube (FLV) Videos
YouTube bụ ndị kasị ewu ewu video saịtị na ụwa. Ị nwere ike ebudatara ibu nke videos site na nke a website. Ma, olee otú ka jikota ha ọnụ nke na ị nwere ike igwu niile YouTube videos dị ka otu ma na a PC, ngwaọrụ, ma ọ bụ TV? Ebe a a ọkachamara YouTube mmakọ na ẹkenam na akụkụ 1 n'ihi na ị na-adị mfe mezue ọrụ. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ jikota videos na e ama uploaded YouTube, na YouTube Video Editor pụrụ inyere gị aka na nke ahụ.
Part 1: Olee ka jikota Na YouTube Videos
Part 2: Olee ka jikota YouTube Videos Online
Part 1: Olee ka jikota ebudatara YouTube Videos
Ngwá Ọrụ gị mkpa: Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụ ihe dị mfe na-eji video edezi ngwá ọrụ. Na ya, YouTube videos ga-akpaghị aka merged n'usoro na-enweghị interrupts. Na n'elu nke, i nwere ike tinye ikwu n'ụzọ n'etiti abụọ YouTube videos mee ka gị na videos ọzọ adabako. Ọ na-enyere gị aka mfe ime ka a foto na-na-na foto (PIP) video, nke bụ maa ọzọ okike ụzọ ka jikota YouTube videos.
Dị mma? Download ya ugbu a na-eji nke a YouTube mmakọ ka jikota gị niile YouTube videos.
Nzọụkwụ 1. Import YouTube faịlụ ka usoro ihe omume
Download na wụnye Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Ọ na-enye ezi nkwado ebudatara YouTube videos (na-emekarị na FLV format). Ị nwere ike ma pịa "Import" na isi windows na họrọ YouTube video faịlụ site na kọmputa gị, ma ọ bụ nanị ịdọrọ na dobe YouTube video faịlụ site na File Explorer ka onye ọrụ Album.
Nzọụkwụ 2. Dọrọ na dobe YouTube videos ka jikota
Ka jikota YouTube videos, họrọ multiple YouTube vidiyo na onye ọrụ Album site na-ejide ala Ctrl ma ọ bụ Mgbanwe isi, na mgbe ahụ ịdọrọ na dobe ha ka ha na video track na usoro iheomume. All YouTube faịlụ ga sonyere otu mgbe ọzọ na-enweghị interrupts na ọ dịghị onye mgbanwe ndabara, ma i nwere ike tinye ikwu n'ụzọ n'etiti obere vidiyo ka ị chọrọ. Nke a ga-ẹkenam ke Nzọụkwụ 3.
Nzọụkwụ 3. jikota YouTube vidiyo na mgbanwe
Site na-agbakwụnye ikwu n'ụzọ, YouTube videos ga-asọpụta omume ọma site na otu na-esonụ. Iji mee otú ahụ, ịgbanwee gaa na mgbanwe taabụ, na ịdọrọ ndị chọrọ ntughari ka usoro iheomume. Alternatively, nri pịa ọ bụla mgbanwe na-ahọrọ "Jụọnụ ndị na-All" na "Random ka All" site popup menu ịgbakwunye ikwu n'ụzọ n'etiti YouTube videos na sekọnd.
Nzọụkwụ 4. jikota multiple YouTube faịlụ n'ime otu
Jide n'aka na ị nwere afọ ojuju na ihe niile. Ị nwere ike pịa Play bọtịnụ ịhụchalụ otú YouTube videos ga-merged. Ọ bụrụ na n'ihi bụ mma, pịa "Mepụta" button ịzọpụta YouTube video dị ka otu. Ya mere, gaa na "Format" taabụ ma họrọ otu chọrọ format na pịa Mepụta na-amalite merging YouTube videos. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị chọrọ igwu na merged YouTube faịlụ na iPod, iPhone, iPad, họrọ "Ngwaọrụ" na họrọ ngwaọrụ gị site na listi. I nwekwara ike ozugbo bulite azụ YouTube maka nkekọrịta ma ọ bụ ọkụ na-DVD maka egwu na TV.
Video Tutorial: Olee ka jikota YouTube Videos
Ngwá Ọrụ gị mkpa: YouTube Video Editor
YouTube Video Editor bụ a nchọgharị dabeere video nchịkọta akụkọ tọhapụrụ site YouTube onwe ya. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-eme ka obere edits videos ha na uploaded jidesie YouTube, nakwa dị ka jikota ọtụtụ mkpachị ọnụ n'ime otu. Ọ na-achọ ọ dịghị ọzọ software, ma ọ bụ nkwụnye ihe nchọgharị-ins (e wezụga Adobe si Flash), nke na-eme ya adaba iji. Otú ọ dị, ọ na-enwereghị ọtụtụ nkiti atụmatụ nke oge a ụbọchị n'ji video edezi software na mgbe mkpọka mgbe emeso nnukwu video faịlụ.
Ịnweta ndị nchịkọta akụkọ
Banye na gị YouTube (ma ọ bụ Google) na akaụntụ. Pịa "Bulite" >> "Dezie" ka Video Editor taabụ.
Ebe vidiyo na usoro iheomume
Nanị ịdọrọ videos na mkpa jikota n'elu usoro iheomume ma ọ bụ see gbakwunyere na akara ngosi na top n'aka nri akuku nke ọ bụla clip.
Nyochaa N'ihi. Ọ bụrụ na afọ ju, see "Asuanetop" button ịzọpụta ntọala.
> Resource> YouTube> Olee ka jikota / Ikpokọta / Jikọọ YouTube (FLV) Videos